လ၏ Crater .....
မေးခွန်း လ၏ Crater .....
1 months ago 8 တစ်နှစ် #696 by PAYSON
အသစ်များကိုရှုခင်း downloads, တစျခု, အမွန်း၏ Crater အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုကြခြင်းဖြစ်သည်။ ငါကနေအိုင်ဒါဟိုရုံ 100 သို့မဟုတ်ဒါမိုင်မှာနေထိုင် ..... စိတ်ဓါတ်ထိခိုက်သော!!!! သင်တစ်ဦးဂျမ်ဘိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင့် hard drive ပေါ်တွင်အာကာသရှိသည်ဆိုပါကကွိုးစားပါ။ ဒါဟာလုံးဝတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဂျမ်ဘိုအကောင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုဒေါင်းလုပ်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအချိန်ယူနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သမျှသောဘေးဖယ်, ကအေးမြသည်။